DEG DEG:-Weerar ku bilowday Qarax oo ka socda Degmada Awdheegle | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaDEG DEG:-Weerar ku bilowday Qarax oo ka socda Degmada Awdheegle
DEG DEG:-Weerar ku bilowday Qarax oo ka socda Degmada Awdheegle
14th August 2019 Arimaha Gudaha, Wararka Maanta 0
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay gudaha degamada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu watay ruux naftii haliga ah, kaas oo lala beegsaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa kadib uu xigay weerar toos ah oo ay soo qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab.
Sida ay soo sheegayaan ilo deegaanka ah waxaa hadda socda dagaal u dhexeeya ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo raggii weerarka soo qaaday.
Ma cadda weli inta uu la’egyahay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Wararkii ugu dambeeyay Xiisad ka taagan Gobolka Sanaag,kadib markii…
Wararkii ugu dambeeeyay Weerarkii Maanta ka dhacay Awdheegle